संघीय सरकारबाट बजेट निश्चित, मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा अस्पताल | चितवन पोष्ट दैनिक
संघीय सरकारबाट बजेट निश्चित, मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा अस्पताल
भरतपुर । संघीय सरकारबाट बजेट पाएपछि यहाँस्थित दुई ठूला सरकारी अस्पतालहरु खरिद प्रक्रियामा लागेका छन् । खरिदका लागि विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले विज्ञापन गरिसकेको छ भने सरकारी अस्पतालले विज्ञापनका लागि तयारी गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालले एकपटक ९ करोड ८० लाख र अर्कोपटक ३ करोड १२ लाख ७० हजार पाएको छ । प्राप्त बजेटबाट मेडिकल उपकरण खरिद, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, भेन्टिलेटर बेड, आइसियू बेड, एचडियू बेड तयार गर्ने र त्यसका लागि विज्ञापनको तयारी भएको भरतपुर अस्पतालका लेखा शाखा प्रमुख हरि लम्सालले बताए ।
उक्त बजेटबाट ५ वटा भेन्टिलेटर, १० वटा आइसियू बेड, मोनिटर, एचडियू सामग्रीसमेत खरिद र व्यवस्थापन हुने लम्सालले जानकारी दिए । स्पेसिफिकेसन तयार भएको उनले बताए ।
कुन सामान किन्न कति बजेट आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयबाट तोकिएर आएकोले काम गर्न केही सहज भएको भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले बताए । ‘साधारण प्रक्रियामा खरिदमा जाँदा छिटो भनेको २ महिना लाग्छ’, अध्यक्ष डा. अधिकारीले भने, ‘तर अहिले मन्त्रालयले १ हप्ताको अवधि राखेर टेन्डर आह्वान गर्न सकिने सुविधा दिएको छ ।
‘अस्पतालमा राखिने एचडियूको सम्बन्धमा कतिवटा र कति मूल्य सरकारले तोकेकोले यसअघि नै यस अस्पतालमा त्यससम्बन्धी काम गरेका प्राविधिकबाट काम गराउन सके झनै छिटो हुने देखिन्छ’, डा. अधिकारीेले भने । ‘लिक्विड अक्सिजन खरिद सरकारबाट सरकार (जिटुजी)मार्फत हुने भएकाले अस्पतालले मात्र चाहेर सम्भव छैन’, उनले भने । केन्द्र सरकारले दिएको बजेट र स्पेसिफिकेसनलाई आधार मानी अस्पतालले एक हप्ताको अवधि राखेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।
क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले पनि कोरोना भाइरस महामारीको विशेष परिस्थितिमा अस्पताललाई लिक्विड अक्सिजन स्टोरेज प्लान्ट खरिद गर्नुपर्ने भएको भन्दै विद्युतीय बोलपत्र निकालेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका अनुसार अब अस्पतालमा लिक्विड ट्याङ्की बन्नेछ ।
केन्द्र सरकारले गत हप्तामात्रै यस अस्पताललाई ८० लाख रूपैयाँ पठाएको थियो । अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको खण्डमा ब्याकअप सहयोगका रुपमा लिइन्छ । भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासजस्तै ट्याङ्की रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छन् ।